ကလေးရဲ့အရပ်နဲ့ခန္ဓါကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဘယ်အချက်တွေက သက်ရောက်မှုရှိနေသလဲ - Hello Sayarwon
ကလေးရဲ့အရပ် ပုမလား၊ မြင့်မလား ဆိုတာနဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ယောကျာ်းလေး၊မိန်းကလေးကွဲပြားမှုနဲ့ မျိုးဗီဇကိစ္စရပ်တွေက ကလေးရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ သက်ရောက်မှုကြီးမားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေမယ့် တခြားအချက်တွေကလည်း အရေးပါနေပါတယ်။
ကလေးရဲ့ကြီးထွားမှုနှုန်းက ပုံမှန်နဲ့စတင်ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းနှေးလာတယ်ဆိုရင် ကလေးကြီးထွားမှုနှုန်းပြ ဇယားမှာ ကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနေရာက အရပ်အမောင်းမှာ စတင်နှေးကွေးလာပြီဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာရပါပြီ။ ကြီးထွားမှုနှေးကွေးနေတာက တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိနေလို့လား။ ကလေးရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို သက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အစားအလွန်အကျွံစားခြင်းက ကြီးထွားမှုလွန်ကဲအောင်နှိုးဆွပေးနိုင်ပြီး ကလေးကို အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် အရပ်ပိုရှည်သွားစေ တတ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဒါမှမဟုတ် အာဟာရဓါတ်မစုပ်ယူနိုင်တဲ့ရောဂါ တို့လို ရောဂါအခြေအနေတွေက ကြီးထွားမှုနှုန်းကို သိသိသာသာနှေးကွေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက်က သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနဲ့ ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းတို့က မရှိမဖြစ်အရေးပါပါတယ်။
ကလေးရဲ့ကြီးထွားမှုနှုန်းနဲ့ အရပ်အမောင်းတို့အပေါ် သက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းအချက်တွေထဲက တချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ယောကျာ်းလေး၊မိန်းကလေးကွဲပြားမှုက ကလေးရဲ့အရပ်မြင့်လာတဲ့နှုန်းနဲ့ကြီးထွားမှုမှာ အဓိကသက်ရောက်နိုင် ပါလိမ့်မယ်။ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားတွေလောက်အရပ်မြင့်မလာတာ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းလည်း ဒီလိုမဖြစ်နိုင်သလို မိန်းကလေးတွေက အစ်ကိုတွေ မောင်တွေထက် အရပ်ပိုရှည်၊ ကြီးထွားမှုနှုန်းမြန်လာတာမျိုး လည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကလေးရဲ့အရပ်ဘယ်လောက်ရှည်မလဲ ၊ ခန္ဓါကိုယ်ဘယ်လောက်ထွားလာမလဲ မှန်းတွက်ချင်တဲ့အခါ အမေနဲ့အဖေကို ကြည့်ကြပါတယ်။ သမီးမိန်းကလေးက အမေရဲ့အရပ်ကိုကျော်သွားပြီဆိုရင် သူ့ရဲ့အဖေက သိသိသာသာ အရပ်ပိုရှည်မယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ သားယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က အဖေ့ထက် အရပ်နိမ့်နေတယ်ဆိုရင် မျိုးဗီဇအကြောင်းရင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ အရပ်အနိမ့်အမြင့်က အဘိုးအဘွားတွေဘက်ကို လိုက်တတ်တာကြောင့် အမေ့ဘက်၊ အဖေ့ဘက်က အဘိုးအဘွားတွေကိုလည်း ကြည့်ပြီး ကလေးရဲ့အရပ်ကို မှန်းနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ မိန်းကလေးနဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းချင်း ကွာခြားကြပါတယ်။
မိဘတွေဆီကနေ သားသမီးတွေဆီကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းဆက်ခံစေတဲ့အခါ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းနဲ့ မျိုးဗီဇတို့က အရေးပါတဲ့နေရာကပါဝင်နေပါတယ်။ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး၊ အရပ်အနိမ့်အမြင့်၊ ကိုယ်ခန္ဓါတည်ဆောက်ပုံ၊ ပင်ကိုစွမ်းရည်၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ ဆံပင်အရောင်၊ မျက်လုံးအရောင်တို့လို ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု ဝိသေသလက္ခဏာတွေကွဲပြားမှုဟာ မိဘမျိုးရိုးကိုအများကြီးမူတည်နေပါတယ်။
အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ စားသောက်မှုပုံစံတစ်ခုမှာ လုံလောက်တဲ့အာဟာရတန်ဖိုးပါဝင်နေရင်တောင်မှ အရပ်မြင့်နိုင်ဖို့ ကလေးရဲ့မျိုးဗီဇပေါင်းစပ်မှုကိုပြောင်းလဲမပစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စားသုံးတဲ့အာဟာရဓါတ် မပြည့်ဝရင်တော့ ကလေးရဲ့အရပ်က ဖြစ်သင့်သလောက်အပြည့်အဝမဖွံ့ဖြိုးနိုင်တော့ဘဲ နှေးကွေးသွားတတ်ပါ တယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓါတ်တွေကြွယ်ဝပြီး ပြည့်ဝဆီ၊ အချိုတွေ၊အငန်တွေ ပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ညီညွတ်မျှတဲ့အစာအာဟာရကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။
ကယ်လ်စီယမ်နဲ့သံဓါတ်တို့အပြင် နွားနို့၊ လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်(သင်္ဘောသီး၊ မုန်လာဥနီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ဟင်းနုနွယ်၊ကန်စွန်းဥ၊ သရက်သီး၊ဖရဲသီးတို့မှာပါတဲ့ ဗီတာမင် A ကအရိုးနဲ့တစ်ရှူးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ကောင်းပါတယ်) ၊ အုတ်ဂျုံ၊ ကြက်ဥ၊ ကြက်သား( ကြက်သားစားပေးရင် ကလေးရဲ့ကြွက်သားနဲ့တစ်ရှူးဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားပေးပါတယ်)၊ ပဲပိစပ်၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊အမဲသား၊ငါး တို့ကို စားသင့်ပါတယ်။ ကလေးစားသောက်မယ့် အစားအစာတွေထဲမှာDHA ပါဝင်အောင်ကျွေးမွေးပေးခြင်းဖြင့် ကလေးကို ခန္ဓါကိုယ်ရော ဉာဏ်ရည်ပါ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေမှာပါ။ စားသောက်မှုထဲမှာ DHA ချို့တဲ့တဲ့အခါ ကလေးမှာ မှတ်ဉာဏ်အားနည်းတာမျိုး၊အရက်ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ သန္ဓေသားရောဂါ (foetal alcohol syndrome) လို့ခေါ်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါစု ပြဿနာတွေဖြစ်စေနိုင်သလို ADHD(ကလေးငယ်များတွင်ဖြစ်သောအာရုံမစူးစိုက်နိုင်သောရောဂါ) ၊ မျိုးဗီဇ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်မှုရောဂါ (cystic fibrosis)၊phenylketonuria (သွေးထဲမှာphenylalanine များတာ)၊ စိတ်ကျရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်သန္ဓေတည်ပြီဆိုရင် အဖေနဲ့အမေဆီက DNA မျိုးဗီဇကို လက်ခံရရှိပါတယ်။ ကလေးက အမေနဲ့တူတာတွေရှိနိုင်သလို အဖေဆီကလည်းဆက်ခံရရှိတာတွေရှိနိုင်ပေမယ့် သူ့မှာ မိဘနှစ်ဦးစလုံးဆီက မျိုးဗီဇတွေပေါင်းစပ်ထားတာများပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့အဝလွန်ပြဿနာမှာ မျိုးဗီဇက အတော်အရေးပါနေတယ်လို့ သုတေသနတွေကဆိုကြပါတယ်။ မျိုးဗီဇကြောင့်ပဲ Prader-Willi syndrome နဲ့ Bardet-Biedl syndrome တို့လို အဝလွန်ရောဂါတွေ ဖြစ်လာစေတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုထိုက်သင့်သလောက်လုပ်ပေးတာက ကလေးရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးမှာ လုံလောက်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိရင် မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကလေးအဝလွန်ရောဂါပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိတာကြောင့် ကလေးရဲ့အရပ်မြင့်နှုန်းနဲ့ အရိုး၊ ကြွက်သားသန်မာကြံ့ခိုင်မှုမှာ အားနည်းစေပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့အရပ်မြင့်မားနှုန်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါအခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ Turner Syndrome ရောဂါ၊ အရပ်ရှည်လွန်းတာ (Gigantism)၊ အရပ်ပုလွန်းတာ (Dwarfism)။ ဒါတွေအများစုဟာ မိဘတွေရဲ့ DNA ကနေ ဆက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ မျိုးဗီဇဆိုင်ရာရောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့ တခြားရောဂါအကြောင်းရင်းတွေကတော့ ဦးနှောက်၊နှလုံး၊ကျောက်ကပ်၊ အဆုတ်ရောဂါတွေ၊အူရောင်ရောဂါ၊ ဒေါင်းရောဂါစု၊ ရှားပါးမျိုးဗီဇရောဂါစုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းခြင်းက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ထိခိုက်စေရုံတင်မကဘဲ ခန္ဓါကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ခဲဓါတ်ထိတွေ့မှုလိုမျိုး အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု တွေက ကလေးတွေအတွက် အရမ်းအန္တရာယ်များသလို ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ တခြားစနစ်တွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အမှန်တော့ ကလေးတစ်ယောက်အရွယ်ရောက်လာပြီး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုပြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မရောက်မချင်း ကလေးက အရပ်ပုမှာလား၊ရှည်မှာလားဆိုတာ ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကလေးအတွက် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ကလေးကိုကောင်းကောင်းရှင်သန်စေပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လူကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေဖို့ လိုအပ်သမျှအားလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ပါပဲ။
Many factors affectachild's growth
အရုပ်သေနတ်က သင့်ကလေးစိတ်ကို ကြမ်းတမ်းစေသလား
ကလေးက တိတ်တိတ်လေး သွေးအားနည်းနေနိုင်တာကို မေမေတို့ သတိထားမိရဲ့လား
မေမေတို့ ဂရုစိုက်နေတဲ့ ကြားကနေ ကလေးတွေမှာ သံဓာတ်ချို့တဲ့ပြီး သွေးအားနည်းတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို မေမေတို့ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
မိဘများအတွက်လမ်းညွှန်, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဒီဇင်ဘာ 11, 2020 .2mins read
ကိုဗစ်ကာလမှာ မိဘတွေနဲ့ တီးခေါက်ကြည့်မိသလောက် ကလေးတွေနဲ့ ကျောင်းတက်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေ အရင်ကထက် ပိုပြီး ဂိမ်းဆော့လာတယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။
အသားအရေနှင့် အလှအပ, ဝက်ခြံ အောက်တိုဘာ 29, 2020 .2mins read
ရေညှိ ထမင်းလိပ်တယ်။ ဘေဘီးက နည်းနည်းဆိုပြီး ပါးစပ်ဟတယ်။ ရေညှိကြော်လေး စားလည်း မေမေ သားသားဆိုပြီး ပါးစပ်ဟတယ်။ ဘေဘီလေးကို ရေညှိကျွေးရမလား။
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း စက်တင်ဘာ 30, 2020 .2mins read
Covid ကာလမှာ ကလေးနေမကောင်းရင် ဘယ်လိုပြုစုပေးရမလဲ ဆိုတာ မေမေတို့ သိထားနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စက်တင်ဘာ 16, 2020 . 1 min read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 9, 2021 .2mins read
ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အားဖြည့်မယ့် ဇာတ်လိုက် (သို့မဟုတ်) ဖြည့်စွက်အာဟာရ
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 16, 2021 .3mins read